PlayStation™Video 3.2.0.1905171621 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.2.0.1905171621 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး PlayStation™Video
PlayStation™Video ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
PlayStation ™ဗီဒီယိုသင်သည်သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်သင်၏ console ကိုမှည့်ပင်လျှင်, PlayStation®Storeထံမှဝယ်ယူရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးပျော်မွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာပါ! အ PlayStation ™ဗီဒီယိုက Android app ကိုအတူ, သငျသညျမြားကိုလညျးငှားသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ စမ်းချောင်းသို့မဟုတ်သင့် Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအပေါ်သင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်ရှိုးပွဲကို download လုပ်ပါနှင့်သင်ပြောင်းရွှေ့ပေါ်မှာဆိုရင်လျှင်ပင်ကိုကြည့်ပျော်မွေ့။
•အချောင်းမြောင်းမပါဘဲသစ်ကိုလွှတ်ပေးရန်ရုပ်ရှင်တွေ Stream သို့မဟုတ် download လုပ်: မီကအများဆုံးရုပ်ရှင်များ, သို့မဟုတ် DVD ကိုအဖြစ်ထိုနေ့။
•သင့်ရဲ့ Android device ကိုမှတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပါ။
• PS ဗွီဒီယိုစာကြည့်တိုက်မှလက်ငင်း access ကို။
• (သဟဇာတကိရိယာများပေါ်တွင် HD မှာ) PS3®, PS4®, နဲ့ Web အပေါ် Access ကိုများနှင့်အခြား devices များကိုရွေးပါ။
* PS4®အပါအဝင်သဟဇာတကိရိယာနှင့်ပြည့်ဝ၏စာရင်းအဘို့, www.playstation.com/video မြင်
မှတ်ချက်: Movie, နှင့်တီဗီအကြောင်းအရာရရှိမှုမှဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားလိမ့်မည်။ တီဗီအကြောင်းအရာမက္ကစီကိုနှင့်ဘရာဇီးမှာလက်ရှိတွင်မရနိုင်ပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်လိုင်စင်နှင့် privacy မူဝါဒ PlayStation ™ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှု subject: https://www.playstation.com/en-us/network/legal/terms-of-service/ နှင့် https://www.playstation.com/en- ကျွန်တော်တို့ကို / ကွန်ရက် / ဥပဒေရေးရာ / privacy ကိုမူဝါဒ /
PlayStation™Video အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PlayStation™Video အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
PlayStation™Video အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
PlayStation™Video အား အခ်က္ျပပါ
videogames100 စတိုး 252 91.76k
PlayStation™Video ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း PlayStation™Video အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.2.0.1905171621
ထုတ်လုပ်သူ PlayStation Mobile Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.playstationnetwork.com/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: 50:95:DA:35:05:13:E1:BF:CE:99:35:88:FF:08:49:48:80:7A:68:8D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): PSM
အဖွဲ့အစည်း (O): SCEI
PlayStation™Video APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ